Posted by LRDP at 12:36 AM No comments: Links to this post
LRDP & ILO Trained for Hotel & Tourism workers ( Pagan , Nyaung Oo)
နေပြည်တော် ၊ပျဉ်းမနား၊ ချောက် ၊ပုဂံညောင်ဦး ဆက်တိုက်ခရီးဆက် ပြီး အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေ ဖွံ့ ဖြိုးရေး လက်ဆင့်ကမ်းနေတဲ့ထဲ မှာ ညောင်ဦးရဲ့ ဟော်တယ်အလုပ်သမားတွေ ကို သင်တန်းပေးရတာ အတော် စိတ်မကောင်းစရာပါ အလုပ်အချိန်အားလပ်ချိန်လေးတောင်မရလို့ မနက်စောစောနဲ့ ညဖက် သင်တန်းပို့ချရပါတယ် သူတို့တွေ လည်း လိုချင်လွန်းလို့ လာကြ ဆွေးနွေးကြတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့အချက်အချာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေ ရှေ့မှာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိူးဖောက်ခံနေရတာ ပိုတွေ့ရတယ် ။ ကျမတို့ မှာ တာဝန်ရှိတယ် ရှင်တို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ် နိုင်ငံတကာ အပြ သမဂ္ဂ တွေ နိုင်ငံတကာ အပြ အဖွဲ့ချူပ်တွေ နိုင်ငံတကာအပြ ဥပဒေသ တွေ မလုပ်ကြပါ နဲ့ ပြည်သူဘာမှမသိဘူး ပြည်သူမှာ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဆိုတာ မသိသလို လုံးဝမရ၇ှိကြသေးဘူးမို့ ဒီ့ထက် အားစိုက်ပြီး ပြိုင်တူတွန်းကြရအောင်လို့
Posted by LRDP at 5:50 AM No comments: Links to this post
ILO & LRDP trained for Magwe,Phokhukuu,Yesakyo,Yenanchaung, Chauk District workers & Trade Unions
မကွေးတိုင်းတွင်းရှိ မင်းတုန်း၊ပခုက္ကူ၊ရေစကြို၊မကွေး၊ရေနံချောင်း၊ချောက် တို့ မှ မှတ်ပုံတင်ကျပြီး အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများအား ILO မှ ကုန်ကျစရိတ်တာဝန်ခံပြီး LRDP မှ စည်းရုံးရေး သင်တန်းပြုလုပ်နိုင်ရေးကို တာဝန်ယူက အလုပ်သမားရေးရာ ဖွံဖြိုးရန် အမှန်တကယ် အလုပ်သမား သမဂ`ဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီး ပေါ်ပေါက်ရန် သင်တန်းပို့ချခဲံကြသည်။
Posted by LRDP at 5:42 AM No comments: Links to this post
LRDP & ILO trained at Mandalay Division
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား သကြားစက် ရုံ အပါအ၀င် ဆွာ ၊ လယ်ဝေး ၊ရေတာရှည် ၊ အေလာ ပျော်ဖွယ်တို့မှာရှိတဲ့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ တွေကို အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by LRDP at 1:45 AM No comments: Links to this post
မည်သည့် အမည်ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် နှင့် မျှမသက်ဆိုင်သော ဒေါက်တာ မင်းညို နှင့် ဒေါ်အိရွှေစင်ညွှန့်  LRDP အနေနှင့် အလုပ်သမားများအား သင်တန်းပို့ ချသွားမည်
၂၅- ၉-၂၀၁၄ မှာ ဒေါက်တာ မင်းညို နဲ့ အိရွှေစင်ညွန်ံနှစ်ယောက် အုပ်ကံ မှာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတွေ ကို သင်တန်းပေးပါတယ် တချိန်က သမဂ္ဂ တခု မှာ အတူ ရှိပေ မဲ့ ကွဲ တော့ Dr မင်းညို ပါမလာ ဘူး အခု မြန်မာပြည်ထဲ ရောက်တော့ ပညာရှင် ဒေါက်တာ မင်းညိုကိုယ်တိုင် အာဏာရှင် --သမဂ္ဂအတု အယောင် ကို လက်မခံ တော့ ဘူး ဒါ့ကြောင့် ကျမ လက်တွဲပြီး သင်တန်း တူတူ ပေးတယ် လူထုအတွက် အလုပ်လုပ်ကြတယ် ကျမတို့ မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူး ဆူညံနေတဲ့ နေပူနေတဲံ လိုင်းကားစီးပြီး ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူး အုပ်ကံ အထိ သွားကြတယ် ပျော်တယ် ပြည်သူ နဲ့ အလုပ်သမား က အရမ်းလိုလားပါတယ်။
Posted by LRDP at 8:07 AM No comments: Links to this post
နေပြည်တော် လယ်ဝေးတွင် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး သွားရောက်
၂၇- ၉-၂၀၁၄မှာ ကျမ ရဲ့ မွေးဇာတိဖြစ်တဲ့ နေပြည်တော်လယ်ဝေးနဲ့ အနီး အေလာမှာ လယ်သမားတွေ လယ်ရေမြုတ် မှု ရေဆိုးမြောင်းပြဿနာကို သွားရောက်ဖြေရှင်းရင် လယ်သမားတွေကို သမဂ`ဂ ဆိုင်ရာ သင်တန်းပို့ချခဲ့ပါတယ် အေလာ SB ကလည်းသူ့ တာဝန်အ၇ လာရောက်မေးမြန်းတဲ့ အခါ FOA ကို ၁၉၅၅ ထဲ ကမြန်မာက လက်မှတ်ထိုး ထားတာ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် ILO က အခမဲ့ စာအုပ်ဝေ ပေမဲ့ အစိုးရ ရဲ့တာဝန် ဆိုတာ သိအောင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by LRDP at 8:02 AM No comments: Links to this post
LRDP မှ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပြဿ နာအား ၀င်ရောက်ဖြေရှင်း ညှိနှိုင်း အောင်မြင်
ဒီနေ့ အတော် ပျော်တယ် အလုပ်ရှင် အလုပ် သမားပြေလည်အောင်လို့ ကျမ တဦးတည်း စက်ရုံထဲ ၀င် ညှိနှိုင်းလိုက်တယ် တိုးမြင့်အောင် ကုမ္မဏီ က ဆန္ဒပြနေတာ တပတ်ကျော်ပြီ ကလေးတွေ က တောင်းဆို အလုပ်ရှင် က လိုက်လျောဖို့ ခက်ခဲ နဲ့ သေချာညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့ အခါ ကျမ ကိုယ်တိုင် စက်၇ုံထဲ ကို ၀င်ခွင့်တောင်းပြီး အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား လိုအပ်ချက်ကို မျှတ တဲ့ ပုံစံဆွေးနွေးတာ အောင်မြင်တယ် ပျော်လိုက်တာ အလုပ်သမား ၂ထောင် နီးပါး ဆန္ဒပြမှုရပ်ပြီး မနက် အလုပ်ဆင်းနိုင်တော့မယ် ရှားပါးစရိတ် ၄ထောင် ၅ထောင်ကနေ ၂သောင်းရပြီး ဒေးကြေး ၂၄၅ ကျပ် တိုးရရှိပါတယ် အလုပ်၇ှင် လည်း အတော် ညှိနှိုင်းရလွယ်တယ် သူ တကိုယ်ကောင်းစိတ် သိတ်မရှိဘူး အလုပ်သမားတွေ က လည်း စက်ရုံတွင်းပြေလည်ချင်တော့ ရလဒ်ကောင်းကို လှိုင်သာယာစက်မှုဇုံမှာ ဆန္ဒအကြီးအကျယ်မပြရပဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by LRDP at 7:43 AM No comments: Links to this post
we give training to MawLaMyine . Mon state from Labour Union
Posted by LRDP at 11:12 PM No comments: Links to this post
we give training to Mon State
Posted by LRDP at 11:02 PM No comments: Links to this post
Capacity Building Training for Trade Unions
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်၊ညောင်တုန်း၊ ဟင်္သတ မြို့ နယ်များရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများ၊ ကျေင်းဆရာများသမဂ္ဂ (ဟင်္သတမြို့ )တို့ အား စွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းအား သွားရောက်သင်တန်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by LRDP at 12:01 AM No comments: Links to this post
ILO နှင့် LRDP ပူးပေါင်း၍ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ၁၀ ဖွဲ့ အားသင်တန်းပေး
မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိအလုပ်သမား သမဂ္ဂ ၁၀ဖွဲ့ နှင့် အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်များအား အိုင်အယ်အိုနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့ မှ ပူးပေါင်းပြီး သင်တန်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသို့ILO FOA ဌာန မှ အရာရှိ မစ္စတာ ခရစ်စတိုဖာလန်း မှလည်း လာရောက် ပို့ချခဲ့ သည်။ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ် ဘက်မှလည်း သင်တန်း သို့ တက်ရောက်ခဲ့သဖြင့် အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အတွက် ယဉ်ကျေးမှု သစ် တရပ် တိုးတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LRDP & ILO Trained for Hotel & Tourism workers ( P...
ILO & LRDP trained for Magwe,Phokhukuu,Yesakyo,Ye...
မည်သည့် အမည်ခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့ ချုပ် နှင့် မျှမသက်ဆ...
နေပြည်တော် လယ်ဝေးတွင် အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး ...
LRDP မှ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပြဿ နာအား ၀င်ရောက်...
we give training to MawLaMyine . Mon state from...
ILO နှင့် LRDP ပူးပေါင်း၍ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ၁၀ ဖွဲ့ အာ...